သွားပြဿနာများ - Hello Sayarwon - စာမျက်နှာ3အနက်မှ 1
သွားပြဿနာများ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖြစ်များတဲ့ အမျိုးအစားတွေ၊ ရောဂါလက္ခဏာတွေ၊ ကုသနည်းတွေကို လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။
Dr. Phyo Wai Lynn မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ •3ရက် အကြာက
ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေအတွက် အံကပ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း
Dr. Thurein Hlaing Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 03/07/2020
သွားပြဿနာများ နဲ့ ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုသိရှိလိုသည်
ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ အပြုံးလေးတွေလှလာဖို့၊ သွားလေးတွေညီဖို့ ဆိုပြီး braces လို့ခေါ်တဲ့ သွားထိန်း စွပ်လေးတွေ တပ်ဆင်တာလေးတွေ ခေတ်စားလာကြပါတယ်။ သွားထိန်းစွပ်လေးတွေ တပ်တာက လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သွားထိန်းစွပ်လေးတွေ တပ်ထားရင်း သွားနာတာ၊ သွားဖုံးလေးတွေ ရောင်လာတာ၊ စားချင်တာတွေမစားရတာ၊ သေသေချာချာဂရုစိုက်ပေးရတာမျိုးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးလေးမှာတော့ သွားထိန်းစွပ်လေးတွေတပ်ထားတဲ့ သူတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ သွားဖုံးရောင်ခြင်းပြသနာ အကြောင်းကို မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ သွားထိန်း တပ်ထားတဲ့ သူတွေမှာ ဘာလို့ သွားဖုံးရောင်တာတွေ အဖြစ်များလဲ။ ၁။ သန့်ရှင်းမှုပိုင်းမှာ အားနည်းတာကြောင့်။ များသောအားဖြင့် သွားထိန်း လေးတွေရှိနေတာကြောင့် သွားကို သေသေချာချာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ မလွယ်ကူတာကြောင့် အဖြစ်များပါတယ်။ သွားကို သန့်ရှင်းရေး ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အခါ သွားချေးတွေ၊ အစာအကြွင်းအကျန်တွေ စုပုံလာပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားလေးတွေ ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ ၂။ သွားလေးတွေ နေရာအနည်းငယ်ရွေ့သွားတာကြောင့်။ Braces လေးတွေက သွားလေးတွေကို […]
Dr. Thurein Hlaing Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 12/06/2020
သွားတွေ ထပ်နေလို့ ကြည့်လို့ မကောင်းဘူး ထင်နေတာလား။ အရင်ဆုံး သိရမှာက သွားထပ် တာ သင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတွေရော လူကြီးတွေရော သွားထပ်တတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သွားထပ်တာကို မဖြစ်မနေ ပြန်ပြင်စရာ မလိုပါဘူး။ သွားထပ်လေးတွေက သင့်ရဲ့ ချစ်မွှေးပါ။ တချို့ဆို သွားထပ်လေးတွေနဲ့ သိပ်ကို ချစ်စရာကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိပါတယ်။ သင့်ကို ထူးခြားစေတဲ့ အမှတ်အသား တစ်ခုပါပဲ။ လူတွေက သွားထပ်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မလှဘူးထင်ရင်၊ စကားပြောရတာ အဆင်မပြေရင်၊ တခြား သွားနဲ့ ခံတွင်း ရောဂါတစ်ခုခု ဖြစ်လာမှပဲ ပြန်ညှိကြတာပါ။ ဒီတိုင်းထားလိုက်တာများပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သွားထပ်လေးတွေက ဘယ်ကဘယ်လို ဖြစ်လာတာလဲ။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ စိတ်ကူးပြောင်းသွားလို့ ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ကုသမှုတွေ […]
အားရပါးရ ပြုံးလိုက်မယ်လို့ ကြံလိုက်ကာမှ သွားကျဲ နေလို့ အသာလေး ပါးစပ်ပိတ်နေလိုက်ရသူတွေ ရှိလား။ သွားကျဲတာက သွားပြဿနာချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူမှ မပြောပေမယ့် ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ ယုံကြည်မှုနည်းတာပေါ့။ ရှေ့သွားကျဲနေရင် ပိုဆိုးသေး။ စကားတောင် ခပ်ဟဟ မပြောရဲဘူး။ ငါ ဘာတွေများ လုပ်မိလို့ သွားကျဲရတာလဲလို့ရော တွေးဖူးလား။ ငယ်ငယ်ကတော့ လူကြီးတွေက သွားကျိုးရင် သွားဖုံးကို လျှာနဲ့ သွားမထိုးနဲ့၊ သွားခေါလိမ့်မယ်လို့ ပြောဖူးတယ်မလား။ ဒီလိုမျိုးတွေ လုပ်မိလို့ သွားကျဲတာလား။ ဒီလို ကျဲတဲ့အတိုင်းပဲထားရမှာလား။ ဘာမှလုပ်လို့ မရတော့ဘူးလားဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ သွားကျဲတာက ဘယ်သွားမှာမဆို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေက ရှေ့သွားကျဲမှပဲ ဂရုစိုက်ကြတာပါ။ ဘာလို့ဆို ကြည့်လို့မကောင်းဘူး ထင်တာကိုး။ သွားကျဲတာကို ဆေးပညာအရ Diastemaလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကလေးမှာရော၊ […]
တချို့လူတွေက နိုးနေတုန်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အိပ်နေတုန်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် သွားကြိတ် တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိပါတယ်။ ဆေးပညာအရ Bruxism လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အခြေအနေသိပ်မဆိုးရင် သွားကြိတ်တာက ကုစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အကျင့်တစ်ခုလို ဖြစ်လာမယ်။ သွားနဲ့ မေးရိုးတွေ ထိခိုက်လာမယ်။ ခေါင်းတွေကိုက်လာတဲ့အထိ ဆိုးလာရင်တော့ ကုသမှု ခံယူရပါမယ်။ သွားကြိတ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရအောင်။ ဘာလို့ သွားကြိတ် တာလဲ။ ဘာကြောင့် သွားကြိတ်တာလဲဆိုတာ ပြောရခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ မျိုးဗီဇကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ သွားကြိတ်တာကို ၂မျိုး ခွဲလို့ရပါတယ်။ နိုးနေစဉ် သွားကြိတ်ခြင်း (Awake bruxism) - ဒါက စိတ်ခံစားချက်တွေ ဖြစ်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားတာ၊ ဒေါသထွက်တာ၊ စိတ်ရှုပ်တာ၊ စိတ်တင်းကြပ်လာရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တချို့တွေကလည်း […]
သွားနဲ့ခံတွင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေအကြောင်းပြောရင် အံသွားပေါက်တဲ့ကိစ္စက မပါမဖြစ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေရဲ့သွား ၃၂ ချောင်းမှာ အံသွား၁၂ ချောင်းပါဝင်ပါတယ်။အစားအစာမျိုးစုံကြိတ်ဝါးချေဖျက်ဖို့ အံသွား တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ အံသွားတွေက သွားဖုံးရဲ့နောက်ဆုံးမှာပေါက်ပြီး သွားတွေစပေါက်တဲ့အချိန်မှာ အံသွား ၈ ချောင်းပဲရှိပါတယ်။။ နောက်ဆုံး အံသွား ၄ ချောင်းက အသက် ၁၆၊ ၁၇ လောက်မှစထွက်လာတတ်ပြီး ဒီ ၄ ချောင်းကို 3rd Molar teeth ဒါမှမဟုတ် Wisdom Teeth လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ အခုဒီဆောင်းပါးမှာတော့ wisdom teeth လို့ခေါ်တဲ့ တတိယမြောက်အံသွားတွေအကြောင်း ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်။ ဘာလို့ Wisdom Teeth ထွက်ရတာလဲ ဒါကိုရှင်းပြဖို့ ဟိုးရှေးပဝေသဏီအချိန်ထိ ပြန်သွားရပါမယ်။ ဟိုးအရင်ကျောက်ခေတ်လူသားတွေက အခုခေတ်လို မီးတွေ၊ မီးဖိုတွေသုံးပြီး အစားအစာတွေမချက်ပြုတ်ခဲ့ဘဲ ရှာဖွေရသမျှ အစားအသောက်တွေကို အစိမ်းပဲ ဝါးစားခဲ့ရတာပါ။ မာတဲ့အစားအစာဖြစ်ဖြစ် […]
သွားကျောက် တည်ခြင်းအကြောင်း သင်ဘယ်လောက်သိလဲ။
ရယ်လိုက်တဲ့ ပေါ်လာတဲ့ သွားကျောက် တွေကြောင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ်မရယ်နိုင် ဖြစ်နေပြီလား။ သွားတိုက်လိုက်တိုင်း သွေးထွက်လို့ စိုးရိမ်နေပြီလား။ စကားပြောမယ်ကြံလိုက်တိုင်း ခံတွင်းအနံ့ဆိုးတွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု မရှိဖြစ်နေပြီလား။ ဒါတွေ အားလုံးကို အဖြေရှာလိုက်ရင် သွားကျောက်တည်တာကြောင့်ဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။ သွားချေး၊ သွားချိုးလို့လဲ အလွယ်ပြောကြပါတယ်။ သွားကျောက် ဘာလို့ တည်ရတာလဲ။ မတည်အောင် လုပ်လို့ရလား။ သွားကျောက်ခြစ်တဲ့အကြောင်း စတာတွေကို ပြောပြပေးပါမယ်။ သွားကျောက် ဆိုတာ ဘာလဲ? သွားကျောက်ဆိုတာ စားကြွင်းစားကျန်တွေ၊ တံတွေးမှာပါတဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ အနည်ကျပြီး ဖြစ်လာတာပါ။ သူက သွားမှာ ကပ်တွယ်ပြီး သွားဖုံးအောက်ကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း စားသွားပါတယ်။ သွားကျောက်က သွားကို အပေါ်ကနေ ကျောက်နဲ့ တစ်လွှာဖုံးထားသလိုပါပဲ။ ပြီးတော့ ပွယောင်းယောင်းလေးဖြစ်နေတဲ့ အတွက် စားသောက်ထားသမျှ အလွယ်တကူ စွန်းထင်းနိုငါပါတယ်။ သွားကျောက်တွေက […]
Hello Sayarwon Panel မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 20/10/2020
ဘာကြောင့် သွားကျဉ် ရတာလဲ။
ရေခဲလေး ကိုက်မိတာဖြစ်ဖြစ်၊ ဟင်းရည်ပူပူလေး သောက်မိတာ ဖြစ်ဖြစ် သွားထဲမှာ ကျဉ်ခနဲ ခံစားသွားရပါသလား။ ဒါဟာ သင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို ပူလွန်း အေးလွန်းတာတွေကို စားလိုက်တိုင်း နာနေပြီဆိုရင် သွားမှာ အပေါက်ရှိနေတာ ဖြစ်နိုင်သလို၊ သွားကျဉ် တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သွားကျဉ်တာက ခဏပဲ ခံစားရတာဖြစ်နိုင်သလို နာတာရှည်လည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချောင်းတစ်လေပဲ ဖြစ်နိုင်သလို သွားတော်တော်များများ ကျဉ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းတွေ အများကြီးပြီး တော်တော်များများကတော့ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို သေချာ လုပ်ရုံနဲ့ သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။ သွားကျဉ် ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာများ သွားကျဉ်တဲ့ သူတွေက သူတို့နဲ့ မတည့်တာ တစ်ခုခု စားလိုက်တာနဲ့ သွားနာတာ၊ ကျဉ်တာ ဖြစ်လာပါတယ်။ သွားရဲ့ အခြေကနေကို ကျဉ်လာတာပါ။ ပိုဆိုးစေတဲ့ အချက်တွေကတော့ […]
"အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်" ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း အခုလိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ကျန်းကျန်းမာမာ အသက်ရှည်ရှည် နေရဖို့ ကိုယ့်ဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ကာကွယ်ခြင်းဟာ ကုသခြင်းထက် ပိုထိရောက်တယ် ဆိုပြီးပြောနေကြပေမယ့်လဲ ရောဂါဖြစ်မှ မခံမရပ်နိုင် နာကျင်လာမှပဲ ဆေးရုံဆေးခန်းပြေးကြတဲ့ သူတွေမနည်းမနောရှိနေဆဲပါ။ သွားနဲ့ ခံတွင်းရောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။ မဖြစ်ခင် ဂရုစိုက်ဖို့ သိနေပေမယ့်လည်း အလေးမထား ပေါ့ဆ မိကြတာကြောင့် သွားကိုက်ဝေဒနာခံစားရမှ ဒါမှမဟုတ် မစားနိုင်မသောက်နိုင် ခံတွင်းက နာကျင်လာတော့မှ သွားဆေးခန်းကို ရောက်လာတတ်ကြပါတယ်။ မရှူနိုင်မကယ်နိုင် အချိန်ကျမှ သွားနှုတ်ပြစ်လိုက်ရလို့ တန်ဖိုးရှိတဲ့သွားတွေ ဆုံးရှုံးကြရတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်ကျတော့မှ ခံတွင်းကင်ဆာ ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ် ဆိုတာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရတာ မနည်းပါဘူး။ သွားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ သွားဆရာဝန်နဲ့ ပြည်သူ တို့ရဲ့ မျှချေ အချိုးဟာ ၁:၇၅၀၀ ဖြစ်ရမယ်လို့ WHO […]
Hello Sayarwon Panel မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 12/11/2020
သွားကျဥ်ခြင်း ဝေဒနာ (tooth sensitivity)
သွားကျဥ်ခြင်း ဝေဒနာ(tooth sensitivity)ကို လူတော်တော်များများ တွေ့ကြုံခံစားဖူးကြမှာပါ။ နာတဲ့ ကိုက်တဲ့ ခံစားချက်မျိုးနဲ့မတူပဲ တော်တော်လေး ကသိကအောက်နိုင်တဲ့ ဝေဒနာမျိုးပါ။ သွားကျဥ်ဖူးတဲ့သူတိုင်း သွားကျဥ်တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လောက်ထိခံစားရခက်လဲဆိုတာ သိကြမှာပါ။ တစ်ခါတရံ မှာ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်သွားက ကျဥ်နေပါတယ်ဆိုပြီး အတိအကျပြောနိုင်ပေမယ့် တချို့သူတွေကျတော့ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်သွား ကျဥ်မှန်း မသိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်. ဘယ်အရာက သွားကျဥ်စေတာလဲ၊ သွားကျဥ်ပျောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ.. ၁။ ကြွေလွှာပါးပြီး ခံစားမှုများသောသွား - ကြမ်းတမ်းစွာ သွားတိုက်ခြင်း၊ ချိုသောအစားအစာများ၊ အချဥ်ဓာတ်ပါတဲ့ အချိုရည်များ ကို အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းတို့ကြောင့် သွားရဲ့ ကြွေလွှာတွေ ပါးပြီး ခံစားမှုပိုများလာတတ်ပါတယ်။ ခံစားမှုများသော သွား (sensitive teeth)တွေဟာ ပုံမှန်သွားတွေထက် အပူအအေးဒဏ်ကို မခံ နိုင်ကြပါဘူး။ ရေခဲရေ၊ အအေး၊ ရေခဲမုန့်၊ ရေခဲချောင်း […]
Hello Sayarwon Panel မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 22/08/2020
သွား လေးတွေ လှပချင်တာတော့ လူတိုင်းပါပဲ။ သွားကျန်းမာချင်၊ သွားလှချင်ရင် သွားမှန်မှန်တိုက်ရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ သွားထိခိုက်ပျက်စီးစေမယ့် အမူအကျင့်တွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ သွားတွေကို ထိခိုက်စေတဲ့ အရာ ကိုယ် ဘာတွေ လုပ်မိနေလဲ ဆက်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါနော်။ (၁) လက်သည်း ကိုက်ခြင်း တချို့က စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန် လက်သည်းကိုက်တတ်တယ်ဆိုပေမယ့် တချို့ကျတော့ လက်သည်းညှပ်နဲ့ ညှပ်ရမှာ ပျင်းလို့ သွားနဲ့ကိုက်ပြီး တိပစ်ကြတာပါ။ လက်သည်း ကိုက်ခြင်းက လက်သည်းတိုသွားဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် တကယ်တမ်း သင်မသိတာက သွားကို ထိခိုက်စေတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ လက်သည်း ကိုက်တာက တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုအတွက် မကောင်းတဲ့ အပြင် သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာ ကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ လက်သည်း မကိုက်မိအောင် သတိထားဖို့ အတွက် လက်သည်း အတုတပ်ခြင်း၊ အရသာခါးတဲ့ လက်သည်းဆိုးဆေး […]